With ukuthuthukiswa yesimanje izinkampani zobuchwepheshe uthola amathuba technical kakhudlwana ukuthuthukisa amasevisi yabo futhi bandise izinga yabo iziqinisekiso. Ukuthandwa okwandisa nokutholakala izixazululo lobuchwepheshe emakethe kukhona izinto mobile ohlelweni lokuqapha. Ngosizo lwabo, noma iyiphi inkampani yezokuthutha kungaqinisekisa ukuphepha ukulethwa kwezimpahla amaklayenti. Zibonisa indawo imoto, lokho kuziwa stop, ijubane ngawo izimpahla nenhlanhla uma umzila washintsha. Emadolobheni amakhulu ikhono ukuqapha ukuhamba kwezithuthi lubalulekile nje kuphela izinjongo zebhizinisi kodwa futhi ekhaya. Ingakusiza ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi indawo ngesivalo.
Imoto Tracker ukukhwezwa ukuthi bangathola amasignali kusuka uhlelo lokuhambisa. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa kanye amasignali e-satellite futhi inethiwekhi wireless global. Ukuze lokhu kumele ukusetha GLONASS uhlelo, GPS noma LBS mojuli. Lokhu ezitolo Tracker kumemori yayo zonke izenzakalo kwenzekani nge imoto. Njalo ngezikhathi ezithile, lolu lwazi uthunyelwa iseva main noma umnikazi ifoni ngesimo imilayezo ye-SMS.
Umsebenzi oyinhloko uhlelo ukucacisa indawo esiqondile imoto ukuze 2.5 amamitha. Ngaphezu kwalokho, kuvumela wena ukuba uhlole umlando ukuhamba izimoto. Okuningi izinhlelo eziphambili yokukhulumisana yezwi umshayeli, ikuvumela ukuba aqophe esikuyo umsindo eduze imoto, kanye nenani kubika igesi mileage yimuphi ukuphambuka we umshini kusuka umzila.
izinto ephathekayo ukuqapha uhlelo zifana kakhulu komunye nomunye, ikakhulukazi zomsebenzi wabo ayafana, kodwa kunomehluko obalulekile ukuthi ukuhlukanisa izinto ehlukahlukene edayiswa emakethe. Yiqiniso, umehluko oyinhloko - kuba ubuzwe.
Futhi, izindlela ezehlukene ekusebenzeni umsakazo amaza. Ngokwesibonelo, e-GPS-ukuqapha izinhlelo ukuvikelwa ababuthakathaka futhi esimeme code-CDMA ukufinyelela, zinjalo ukonga ngaphezulu futhi engabizi. Kodwa lesi simiso GLONASS ivikeleke, okuthembekile FDMA umugqa abazinikezele, kodwa kudinga ukusetshenziswa kwezimali okukhulu kwemithombo.
Ngaphezu kwalokho, kukhona umehluko indawo iziphuphutheki, isiginali aphethe. Ngakho, iziphuphutheki Russian ingashintshiwe phakathi ukujikeleza Earth. Isebenzisa iziphuphutheki eziyisishiyagalombili kanye nezindiza ezinemishini yokuthwebula ephambili ezintathu. Kodwa endabeni ka-US iziphuphutheki kudingeka ukuvumelanisa njalo nedatha ukulungiswa. Lapha kufika iziphuphutheki ezine ukusebenza kanye nezindiza ezinemishini yokuthwebula ephambili eziyisithupha. Futhi, kunomehluko Ezindaweni ezahlukene futhi isignali iphutha. Ngokwesibonelo, uhlelo GPS-zokuqapha can idatha abakhohlakele uhla emibili kuya kwemine amamitha, futhi uhlelo GLONASS - kusuka ezintathu kuya kweziyisithupha. Ngokwalokho okubikezelwa, lokhu igebe kuzoncishiswa amasentimitha ayishumi 2020.
Inketho engcono izinkampani ezenza umsebenzi wezokuthutha ukusebenzisa izinhlelo ukuthi zisekela kokubili indlela navigation. Bavumela wenze iphesenti ukunemba ukuthola ezokuthutha kangcono kanye nomsebenzi ngisho ngaphansi kwezimo ezinzima of emadolobheni amakhulu nge high density zezakhiwo, ezithinta amasignali e-satellite.
Isethelayithi ukuqapha ezokuthutha kubalulekile ehambisa futhi inkonzo neminyango kuzomele uthole idatha real-time indawo yezithunywa futhi imoto. Ngakho, ungakwazi ngokushesha umkhondo wokuthi yimaphi umsebenzi esiseduzane iklayenti ehhovisi laleyo nkampani. Futhi, badinga izinkampani ukuthi babe imikhumbi yabo izimoto, kuhlanganise isevisi yetekisi, izinkampani Logistics, adjuster ukunyakaza ezokuthutha zomphakathi.
Ngosizo mobile uhlelo lokuqapha izinto ukulandelela indlela yangempela ukubala elula kunazo nemizila engabizi futhi lunciphise nezindleko zokuba ukulethwa kwezimpahla. Ngaphezu kwalokho, uzovikela inkampani kusukela abasebenzi abonakele ngubani ngokukhethekile umoya amakhilomitha esengeziwe noma balithulule uphethiloli izidingo zabo. Kuyaphawuleka ukuthi izinhlelo yesimanje ungakwazi ukulandelela umshayeli. Ngokwesibonelo, uma umshini ishiywa ngaphandle umzila ngaphambilini kuchazwe, ungakwazi ukude shaqa injini. Futhi kukhona inketho ukulawula ukuthungela nokusetha imoto ukuze izosebenza kuphela ngemva imilayezo ye-SMS. GPS-ukuqapha uhlelo esetshenziswa nomkhawulo ijubane umshini, ngaleyo ndlela eziphatha zokunciphisa petrol. Abathungathi bawo abaningi anemisila inkinobho uvalo evumela umshayeli ukucela usizo ngendlela esifike ngesikhathi, ukuba avikele ukuphila nokuphepha wezimpahla. Futhi khona ukuxhumana ngezwi iyehlisa ukusetshenziswa mobile.
"Vialon" uhlelo ingenye ezivame kakhulu kule lwasekhaya ezisekelweni isofthiwe emakethe ukuqapha satellite nge web esibonakalayo. Ngosizo lwawo, wenza ukulawula izimoto ngokusebenzisa ifu ngobuchwepheshe besimanje. izinto mobile uhlelo lokuqapha "Vialon" ihlukile izimbangi zayo ku kalula kuqala ukusetshenziswa kanye esisizayo. Njengoba akudingekile ukufaka isofthiwe eyengeziwe, ungakwazi ukubuyisa idatha usebenzisa isiphi isiphequluli. Into esemqoka - kuyinto uxhumano lwe-inthanethi futhi iyiphi igajethi yesimanje ingasetshenziswa ithrafikhi yakho.
Uhlelo usebenza ngokubambisana ne GLONASS GPS, ethuthukisa kakhulu nekusebenta isibonisi idatha. Kuthatha lwezinhlobo ezivame kakhulu amakhadi elikuvumela ukuba masinya ukwakha umzila futhi ulandelele izimoto ngaphandle kokulibala. Lisebenzisa ekhethekile idatha uhlelo isitoreji evikela imininingwane kanye nomsebenzi imodi okusheshayo. Ngosizo lwawo, kombiko kuthatha imizuzwana embalwa kuphela.
mobile ukuqapha izinto uhlelo "Almaz" yakhelwe ukuzilawula ngokuzenzekelayo inkampani yezokuthutha. Ingasetshenziselwa emikhakheni ehlukahlukene. Ngo emakethe yasekhaya, kuthandwa phakathi Logistics izinkampani, inkonzo Iqoqo abomthetho. Siqukethe hardware, i-software futhi uthuma ezikhumulweni.
Ukuze sithole yendawo olusetshenziswa yi-GLONASS GPS in real-time. Nge simiso ungakwazi ukude ukulawula imoto, ukulawula mkhosi, kanye nezinye izindlela isaziso, uthola futhi kusindisa idatha isimo yezokuthutha, ukucutshungulwa eziyinkimbinkimbi futhi nangama idatha. Ngaphezu kwalokho, kungasiza ukuxhumana phakathi umshayeli kanye isilawuli, kanye ukuthutha ividiyo. Kukhona inkinobho uvalo kanye neminye imisebenzi ebalulekile.
mobile ukuqapha izinto ohlelweni iyahluka kwenye izimbangi zayo ithuba ukuxhumana umshayeli ngokusebenzisa imigudu VHF. The ukuphela izimele uxhumano kugridi. Lolu hlelo akuyona kuphela mobile, kodwa futhi ukuba izinto umile. Umphathi Private Ungalalela into. Ukuphela ukwazi ukusebenza amahora ambalwa ku ibhethri ezimele ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi. Uma ukukhulumisana iphazamisekile ngento, dispatcher ngeke ngokuzenzakalelayo waziswe ngayo.
Isethelayithi ukuqapha ezokuthutha kubaluleke kakhulu izinkampani eziningi ehilelekile Trucking nangale. Ngisho ngesikhathi izinhlelo zokulawula kwemuli ukusiza ukwenza imisebenzi yansuku zonke. art emakethe ngonyaka uthola entsha uhlelo prototype kokulandela, kanye izinga lomsebenzi wabo is njalo ngcono. Manje ungakwazi ukuthenga izinhlelo yinkimbinkimbi nelula ukuze kutholelwe lwemikhumbi izimoto, esiza kakhulu ukunciphisa izindleko yenkampani.
Ikhasi eligcinwe ngesinye isibukezo in the Navigator
Indlela yokusetha i-Navitel ku-navigator
Ngisibuyekeza kanjani ibalazwe Garmin Itilosi? Indlela ubuyekeze amabalazwe ku itilosi Garmin Nuvi?
GPS-izithuthi zezimoto: ukukhetha, imiyalo, amanani
Bayashintshana ekufukameleni amaqanda turkey ekhaya: lokushisa kanye nomswakama Imodi, isithombe, amaqanda bayashintshana ekufukameleni Ithebula turkey ekhaya incubator
Ukudoba eLwandle Shchuchye
Umlobi Sorokin: inkosi conceptualism
Indlela Yokwenza Dreamcatcher? Step by step Umhlahlandlela
Akukho ukufinyelela ifolda lapho i-Windows 7: kanjani ukuze sithuthukise isimo
Izimfihlo zokubeka izinto zokusebenza ezakhiwe ekhishini
Xanthoma esiswini: incazelo, izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa